Soomaalida Wax Ku Soo baratay Turkiga Oo Ka Hadashay Isbadallada Qiimaha Lacagta Turkiga – Goobjoog News
Qoraal ay Goobjoog News soo gaarsiiyeen koox la baxday “Ururka Soomaalida wax ku soo baratay Turkiga” ayey ku sheegeen sida ay uga xunyihiin isbadallada qiimaha lacagta Turkiga iyo saameynta uu ku yeeshay nolosha dadka Turkiga ah.
“Naadida Khariijiinta wax ku soo bartay dalka Turkiga, waxaa ay si gaar ah isha ugu hayaan arrimaha ku saabsan isbadallada qiimaha lacagta Turkiga, taasi oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha wadanka aan walaalaha nahay ee Turkiga, Naadiga waxaa uu aad uga xunyahay dhibkana la qeyb-sanayaa saameynta ka dhalatay qalaanqalka maaliyadda ee ku dhacay shacabka aan walaalaha nahay” ayaa lagu sheegay qoraalka.
Naadigan Khariijiintan waxaa ay xuseen in Turkiga uu dalka Soomaaliya yimid xilli ay dhibaato ka jirtay, xilligaas uu booqasho ku yimid ra’isul wasaare Erdogan 2011, isaga oo horay u soo waday hey’ado ay ka mid yihiin(Tika, Turkish Kizilayi, Diyanet), ilaa xilligaasina ay mashaariicda joogta yihiin.
Naadiga waxaa ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed inay iibsadaan lacagta iyo badeecooyinka Turkiga, iyaga oo si gaar ah shacabka ula dar-daarmay inay isgarab-taagaab Turkiga.
Dood Looga Hadlayay Ilaalinta Xaquuqda Caruurta Oo Lagu Qabtay Dhuusamareeb